ကုန်ပစ္စည်းကို Amazon သို့ပြန်ပို့နည်း Gadget သတင်း
ကုန်ပစ္စည်း Amazon သို့ပြန်ပို့နည်း
အမေဇုံ ၎င်းသည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသုံးအများဆုံးအွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီးစပိန်နိုင်ငံတွင်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်မှတ်တမ်းများကိုချိုးဖျက်နိုင်ပြီးသူတို့အလုပ်လုပ်သည့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဌာနကိုချဲ့ထွင်နိုင်ခဲ့သည်။ နှင့်ဝန်ထမ်းများစွာ။ ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်ဖန်တီးခဲ့သောကုမ္ပဏီ၏ရောင်းအားများထဲမှမည်သည့်အရာကိုမဆို ၀ ယ်နိုင်စွမ်းရှိပြီးယူရိုငွေတစ်လုံးတည်းမသုံးစွဲဘဲအလွယ်တကူပြန်ပို့နိုင်သည်။
Amazon သည်သင်ဝယ်ယူထားသောမည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမဆိုအချိန်အတော်ကြာ။ ရှုပ်ထွေးမှုများစွာမရှိဘဲပြန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်ဝယ်ယူခဲ့သည့်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုသင်တစ်ခါမျှမပြန်ခဲ့ပါကယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြတော့မည် အမေဇုံမှာကုန်ပစ္စည်းပြန်လာဖို့ဘယ်လို.
၎င်းသည် virtual store ကြီးတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ရှိပါကအလွန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောကြောင့်စိတ်မပူပါနှင့်။ အဓိကအားဖြင့် e-commerce ပလက်ဖောင်းအားဖြင့်ပြန်လည် ၀ န်ဆောင်မှုရှိခြင်းကြောင့်သင်၌ရှိသည့်ငွေအားလုံးသို့မဟုတ်အားလုံးနီးပါးကိုအလွယ်တကူပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ ပေးဆောင်
1 ကုန်ပစ္စည်း Amazon သို့ပြန်ပို့နည်း
အမေဇုံတွင် ၀ ယ်ထားသောထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုပြန်ပို့ရန်၊ သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏အမှာစာများအပိုင်းကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမည်။ အခုသင်ပြန်ချင်သောအမိန့်ကိုရှာရလိမ့်မည်။ ထုတ်ကုန်ခလုတ်ကိုပြန်သွား (သို့) အစားထိုးပါ။
ခရစ္စမတ်ကဲ့သို့သောအချို့သောအချိန်များတွင်ဤကာလသည်အလွန်များပြားလာနိုင်သော်လည်းမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြန်ပို့သည့်ကာလသည်ရက်ပေါင်း ၃၀ ဖြစ်ကြောင်းမမေ့ပါနှင့်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပြီးခဲ့သည့်ခရစ်စမတ်ရာသီတွင်အမေဇုံသည်ပြန်ပို့မည့်ရက်ကိုရက်ပေါင်း ၆၀ ထက် ကျော်လွန်၍ လူတိုင်းကပြန်လည် ၀ ယ်ယူရန်အချိန်တိုလိမ့်မည်ဟုမထင်ဘဲ ၀ ယ်နိုင်သည်။
ပေါ်လာသည့် drop-down တွင်သင်ထုတ်ကုန်ကိုပြန်ပို့လိုသည့်အကြောင်းရင်းကိုတတ်နိုင်သလောက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားရမည်။ သင်လိုအပ်လျှင်မှတ်ချက်တစ်ခုထည့်ပြီး Continue ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
သင်ရွေးချယ်သည့်အကြောင်းပြချက်ပေါ် မူတည်၍ ဆောင်းပါးကခွင့်ပြုသရွေ့ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည် ပစ္စည်းလဲလှယ်ရန်တောင်းဆိုခြင်း (သို့) အတူတူပါပဲ၊ ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုကိုတင်ပို့ခြင်းသို့မဟုတ်ငွေပမာဏပြန်အမ်းခြင်း ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ပြန်သွားမည့်ပစ္စည်းသည်ဖိနပ်တစ်ရံသာဖြစ်ပါကအမေဇုံကသင့်အားသင့်လျော်သောအရွယ်အစားရှိအခြားသူများကိုသင်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးမည်။ သို့မဟုတ်ထိုပမာဏကိုသင်ပြန်အမ်းနိုင်သည်။ သင်ရွေးချယ်လိုက်သောရွေးစရာနှစ်မျိုးလုံးသည်သင်၏အိတ်ကပ်ထဲ၌အပိုကုန်ကျစရာမလိုပါ။ အကယ်၍ ပစ္စည်းကိုပြင်ပရောင်းချသူတစ် ဦး က Amazon သို့ရောင်းချခဲ့ပါကပြန်လည်ရောင်းချမှုကိုယခင်ကခွင့်ပြုချက်ရပြီးကတည်းကဤအရာအားလုံးသည်ကွဲပြားနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်က Amazon ကိုပိုက်ဆံပြန်ပေးရန်ရွေးစရာကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုလျှင်သင်ငွေကိုလက်ခံလိုသောကြောင့်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ Amazon လက်ဆောင်ဘောက်ချာသို့မဟုတ်မူလငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအားဖြင့်။ ပိုက်ဆံပြန်ရရန်စောင့်ဆိုင်းခြင်းသည်သင်ပစ္စည်းကိုပေးပို့ပြီး ၅ ရက်မှ ၇ ရက်အကြားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် virtual store ၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာတွင်လက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်သည်။.
ထုတ်ကုန်ကိုပေးပို့နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပြန်လာနိုင်ရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများအနက်မှတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမည်။ သင်ကိုယ်တိုင်၎င်းကိုညွှန်ပြသည့်စာပို့ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်စာတိုက်သို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်၎င်းကိုယူရန်သင့်အိမ်သို့လာရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ သင်ဝယ်ယူထားသည့်ထုတ်ကုန်ပေါ် မူတည်၍ ပြန်အမ်းသည်အခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်များသောအားဖြင့်သင်ယူဆရမည့်ပမာဏကိုသင်အားသွင်းပေးလိမ့်မည်။ ကုန်ပစ္စည်းကိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှတစ်ဆင့်ရောင်းချသည့်အခါဖြစ်လေ့ရှိသည်။
နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ ရေကြောင်းအတွက် Amazon ကကျွန်ုပ်တို့အားထောက်ပံ့ပေးမည့်တံဆိပ်များကိုပုံနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်၎င်းတို့ကို ဖြတ်၍ သင်ပြန်သွားတော့မည့်အထုပ်ပေါ်တွင်ကပ်ထားပါ။ ညွှန်ပြထားသောတံဆိပ်ကိုပြန်ပို့မည့်ပစ္စည်းတွင်ထားရန်မမေ့ပါနှင့်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးအဆင့်လိုအပ်သည်။ ၎င်းကိုစာတိုက်သို့ပြန်ပို့ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့အားပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်ယူရိုငွေတစ်ခုတည်းကိုမယူဆောင်ခြင်း၊ အမှန်တကယ်အဆင်ပြေပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Amazon ၌ဝယ်ယူထားသောကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်အောင်မြင်စွာပြန်ပို့ပြီးပြီလား။။ ဤစာမူသို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သည့်လူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုမှမှတ်ချက်များအတွက်သီးသန့်ထားသည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြပါ။ သင့်တွင်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်ပြproblemsနာများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ၊ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » အမေဇုံ » ကုန်ပစ္စည်း Amazon သို့ပြန်ပို့နည်း
ပထမ ဦး ဆုံးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသည့် Roborace ကားမတော်တဆမှုတစ်ခုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်
Xiaomi ၏ပထမဆုံးပရိုဆက်ဆာ Pinecone သည်တင်သည့်နေ့စွဲရှိသည်